Dhab | November 2019
Sida loo daryeelo epiphyllum geedka
Ugu Weyn Ee Dhab
Sidee loo ilaalin karaa "Calaamad" Cathedral "cudurada iyo cayayaanka
Inta lagu jiro xilliga horumarinta firfircoon ee teknoolajiyada beeraha, way fududahay in la helo noocyo isabuursan oo ku haboon xaaladaha gaarka ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo isteroberi ah, laga soo ururiyo si loogu magacaabo "shaqaalaha". "Shaqeyn" noocyo waa waqtiga-la tijaabiyey iyo noocyo of isteroberi. Kuwaas waxaa ka mid ah pear "cathedral", waxay ku guulaysatay jacaylka beeralayda sababtoo ah fududeynta daryeelka iyo natiijooyinka la saadaalin karo.
Godetia waa ubax beerta sanadlaha ah oo ka soo jeeda qoyska dumarka. Waxaa jira ilaa 20 nooc oo dhir ah oo laga heli karo qaaradaha Mareykanka. Ubaxyada dhirta waa sida xayawaanka. Godetia waa quruxda ugu horreysa ee qoyskiisa waxaana inta badan loo isticmaalaa naqshad beerta jilicsan. Ma taqaanaa?
Beer habboon iyo daryeel ee periwinkle
Periwinkle waa ubax qurux badan oo jilicsan, badanaaba loo isticmaalo geedo qurxiyo iyo ubax marka la qurxinayo beeraha, beeraha iyo meelaha. Maanta waxaa jira ilaa laba nooc oo ah noocyada dhirta, mid kastaa wuxuu leeyahay muuqaalkiisa dibediisa, laakiin markii ay koraan, waxay dhammaantood u baahan yihiin habab isku mid ah.
Marka beero dhuuban guga, dhirta sii kordhaya ee bannaanka u furan
Dhirta waa mid ka mid ah dhirta ugu horeysa ee ku raaxaysan guga leh cagaarka iyo urta dabeecadda leh. Iyada oo ay sabab u tahay heerka sare ee fiitamiinada iyo mareellada, waxaa si firfircoon loo isticmaalaa karinta iyo daawada labadaba. Bannaanka u khibrad leh waxay ku andacoodaan in dhirta saxda ah ee dhirta guga ee dhulka furan ay bixin doonaan goosashada wanaagsan.
Cagaha Epiphyllum waa warshad epiphyhytic oo leh xididdada aaladda. Dhiciddii ubaxa cagaaran ee midabka cagaaran ama midab leh, oo leh geeso jilicsan ama jug leh. Warshadu waxay gaartaa dhererka qiyaastii 60-70 cm, sidaas darteed waxay u baahan tahay taageero. Ubaxa wuxuu leeyahay qaabka jilitaanka, dhererkeedu wuxuu gaaraa 40 cm Cagaarka ubaxa waxay leeyihiin casaan, caddaan, casaan, jaale ah, midab bunni ah, dhexaadkoodu waa kala duwan yahay 10-12 cm.
Sidee loola tacaalaa cayayaanka iyo cudurada Tui
Mid ka mid ah waraaqaha caanka ah ee caanka ah waa thuja. Waxaa lagu beeray beeraha, meelaha lagu qurxiyo, waxay qurxiyaan agagaarka agagaarka dhismayaasha, inta badan lagu beeray dacha ama sirqoollada beerta. Nasiib darro, thuja waxay u nugul tahay cudurada iyo cayayaanka, sida loola macaamilo, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan. Sida loola tacaalo cudurrada thuja Cuncunka leh cudurrada thuja waxay noqon kartaa, laakiin waxay ka fiican tahay ka hortagga.
Sida loola tacaalo cudurrada iyo cayayaanka aronii (ash buur), miro madow
Chokeberry waxay leedahay difaac wanaagsan, sidaas darteed cudurada iyo cayayaanka ayaa aad u dhibaateeya. Si kastaba ha noqotee, suurtogalnimada cudurku aad ayuu u kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran joqoraafiga, cimilada, dhirta kale iyo waxyaabo kale. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in la ogaado cayayaanka iyo cudurrada ay la kulmi karaan marka ay sii kordhayaan chokeberry si looga fogaado dhibaatooyinka dhirta.
Sidee loo beeraa beerta beerta
Noloshu waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan, iyada oo aan macquul aheyn in la qiyaaso dhadhanka cuntooyinka badan iyo dhammaan cabitaanada aad jeceshahay (waa ku filan inaad dib ugu xasuusato Mojito caan ah - cocktail oo cusbooneysiin leh oo la xidhiidha xagaaga, badda iyo maqaarka). Ma taqaanaa? Nolol ayaa loo adeegsadaa bani-aadmiga tan iyo wakhtigeedii.
Cudurrada beerta: ka hortagga, calaamadaha iyo daaweynta
Boorashka stoneplant waa mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan. Sida dhirta miraha kale iyo midhaha kale, plomme waxay u nugul yihiin weerarada cayayaanka oo ay saameeyeen cuduro kala duwan. Si beerista dalaggu u keeno oo keliya raaxada, iyo beergooyska oo ka mid ah tayo sare iyo badan, ninkii beerta oo idil waa inuu ogaadaa cudurada tubta "wajiga" oo awood u leh inay la dagaalamaan.
Sidee loola tacaalaa cudurrada toon ah
Carnation waa mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan ee loo isticmaalo jarida bukarta. Waxaa lagu koray dhulka furan iyo koriyo. Ubaxyada duurjoogta ah iyo dhirta ayaa badanaa dhif u ah inay xanuunsadaan noocyo kala duwan oo cuduro ah. Ma dhihi kartid dhirta aqalka dhirta, oo inta badan ay saameeyaan bakteeriyada, fungi, fayraska.
Noocyada sii kordhaya Duufaanka sii kordhaya: beeridda for geedo iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Maanta waxaan diiradda saari doonaa carqaladda Chabo ee berrinka bannaan. Ubax Tani waxay jeceshahay by growers ubax badan oo xaqiiqda ah in laga bilaabo maalmaha ugu horeeya ee xagaaga ilaa dayrta goorta dhirta jecelyahay ubax in la gooyaa hadiyad ama loo isticmaalo si loo abuuro qaybaha. Carnation Shabo waxay kor ugu kacdaa ilaa 60 cm, iyo hal xilli xilli sii kordhaysa waxay ku siisaa 35 caleemo ubax.
Ereyga "xayawaan" wuxuu ku xiran yahay birta. Waxaa soo baxday in sidoo kale waxaa lagu magacaabaa nooc ka mid ah cudur fungal ee dhirta kala duwan, taas oo awood u leh in la baabi'iyo inta badan ee beerto, haddii aan wax ka qaban. Waa maxay khatarta khatarta ah ee Roobka ah oo kaliya ma ahan in wax lagu dhufto muuqaalka geedka, laakiin sidoo kale ay ka baabi'iso gudaha.
Noocyada iyo nuucyada miraha yaryar ee yaryar ee Épinay ka hor inta aan la beeri
Wax kasta oo ku saabsan geedaha hibiscus beerta: sawirrada, diyaarinaya cimilada qabow iyo daryeelidda dhirta beerta
Yaanyada yar-yaryar ee yaryar ee "Cas Caramel" F1: Qeexida noocyada kala duwan iyo faa'iidooyinkeeda
Khasaaro of Poltava lacag: sifooyinka beerashada ee xaaladaha guriga
Dad badan oo casri ah oo leh dareen xoog badan ayaa la xariira daroogooyinka kala duwan oo ku salaysan alaabta ceeriin iyo cuntooyinka cagaarka ah, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha'ahaatee hoos u dhigayaan sifooyinkii wanaagsanaa iyo saameynta cad ee ay ku heleen gargaarkooda. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa beerta Gooryaanka, iyo sidoo kale siyaabaha loo daweeyo iyo waxyeelooyinka suurtogalka ah ee isticmaalka. Read More
Dhiiga caanaha ariga: sababaha iyo xalalka
Mid ka mid ah noocyo xagaaga wanaagsan - pear "Lada"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhab 2019